सबैको अगाडि करिनाले क्याट्रिनालाई भनेकी थिइन् ‘भाउजु’ ? – Dailny NpNews
सबैको अगाडि करिनाले क्याट्रिनालाई भनेकी थिइन् ‘भाउजु’ ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८ समय: ११:१५:३०
काठमाडौं । बलिउडका चकलेटी अभिनेता रणवीर कपूर फिल्म भन्दा पनि पर्सनल रिलेशनसीपका कारण चर्चामा रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय अभिनेता रणवीरको अफेयर क्युट अभिनेत्री आलिया भट्टसँग चलिरहेको छ ।
पछिल्लो समय यस रियल जोडीलाई फ्यानहरुले पनि निकै मन पराइरहेका छन् । साथै उनीहरु विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि सँगै देखिदै आएका छन् । अब यो जोडीलाई फ्यानहरुले छिट्टै फिल्ममा पनि देख्न पाउने भएका छन् ।
आलिया भन्दा पहिले अभिनेता रणवीर कपूरको नाम अर्की कुशल अभिनेत्री क्याट्रिना कैफसँग जोडिएको थियो । त्यतिबेला अभिनेत्री करिना कपूरले क्याट्रिना कैफलाई भाउजुसमेत भनिसकेकी थिइन् ।
त्यसोत एक ताका रणवीर कपूर र क्याट्रिना कैफको अफेयरको चर्चा जतासुकै हुने गथ्र्यो । तर, रणवीर र क्याट्रिनाले भने आफ्नो कफेयर रहेको कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । तर, ऊ बेला राण्वीर कपूरका बहिनी एवं अभिनेत्री करिना कपूरले क्याट्रिना र रणवीरको सम्बन्धको बारेमा मोहर नै लगाएकी थिइन् ।
रणवीर र क्याट्रिनाको ब्रेकअप हुनु केही वर्ष अगाडि मात्र अभिनेत्री करिना कपूरले करण जोहरको शोमा उनीहरुको (रणवीर र क्याट्रिना)को सम्बन्धको बारेमा कुरा गरेकी थिइन् । उक्त शोमा करिनाले रणवीर र क्याट्रिनाको बारेमा कुरा मात्र गरिनन्, उनले क्याट्रिनालाई ‘भाउजु’समेत भनेकी थिइन् ।
साथै, उनले रणवीर र क्याट्रिनाको बिहेमा लेहेङ्गा लगाएर ‘चिकनी चमेली’ गीतमा डान्स गर्ने समेत बताएकी थिइन् । करिनाले क्याट्रिनाको तारिफ गर्दै भनेकी थिइन्, ‘उनी नकै राम्री युवती हुन् ।’
सन् २००९ मा रिलिज भएको फिल्म ‘अजब प्रेमकी गजब कहानी’को सुटिङमा रणवीर र क्याट्रिनाको भेट भएको थियो । त्यसपछि उनीहरुको अफेयरको चर्चा मिडियामा फैलिएको थियो । तर, फिल्म ‘जग्गा जासुस’ फिल्मपछि उनीहरुको ब्रेकअप भएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेको थियो ।